Umuntu ngamunye isakhiwo sabo yokwakheka kusukela ekuzalweni futhi ngesikhathi sonke ukuthuthukiswa. Abantu abaningi ababulawa waveza izici ezithile ezidinga ukushintshwa surgically, uma bengenayo ukushintsha eyabo inqubo yentuthuko we umzimba. Ukuze wenze lokhu, afeze ukuhlinzwa ukhishwe izinhlangano okungafuneki kweminyaka ethize.
Hlobo luni ezifakwa
Omunye zokwakheka ezifana kukhona izigaxa Bichat. Kuyini lokhu? Lokhu kumiswa okunamafutha ezigcine elise ezijulile ngaphansi kwesikhumba ebusweni, kodwa hhayi exhumene naso. Lokhu kumiswa has a ukumisa kunalokho xaka futhi kungenziwa akhiwe ngenhla noma ngezansi lwaleli zygomatic. Kodwa kulokhu sikhuluma inqubo, okuyinto endaweni izihlathi, okuyinto wavulwa anatomist French Bisch.
Ukuze ncamashi kukhona yini yinhlama Bisha, ke ayikaziwa, kodwa kukhona kokuqagela ukuthi uhlobo futha, okuyinto eyenza ukusebenza kuhle kwe-apharathasi masticatory. Kodwa ngenkathi kususwa ukuhlafuna umsebenzi akashintshi. Ngezinye esemncane kakhulu, izingane kumiswa amafutha okungase kuthintwe kuzo zombili izihlathi, futhi zitholakala imisipha masticatory. Lokho izigaxa namanoni Bichat ukunikeza ingane ubuso amnandi nokuvuvuka abadala futhi ubuso ubukeka egcwele.
Kuzokwenzekani umuntu uma ususa izigaxa Bisha? Umphumela walokhu uyoba sengathi ukusivumela izihlathi njengoba amanzi okuphuza ngokusebenzisa tube. Lokhu kungenziwa ngokuthi "umphumela Marlene Dietrich." Man uthola ubuze nenhle of izihlathi usebenzisa ukusebenza, kuyilapho actress edume usezuze lo mphumela ngokususa namazinyo emuva, njengoba legend has it. Manje asikho isidingo sokususwa amazinyo, ukuqhuba ukusebenza ngokwanele.
Ngoba bonke ukuthi le nqubo kumele kwenziwe lokho okudingayo ukususa izigaxa Bisha? Ukusebenza luvame kakhulu emantombazaneni abasha abafuna ukwenza ubuze imfashini izihlathi. Ezigulini omdala, futhi afeze ukusebenza enjalo, njengoba ngenxa accumulations zabantu amafutha engimbumbile "bulldog izihlathi." Ukuze ezigulini ezineminyaka ukuhlinzwa wenziwa ngokuhlanganyela isikhumba kokuqina ebusweni. Uma kungenjalo, kungenzeka lowo muntu ubukeke ukhathele.
Ukuze anikeze ngasekupheleni-ukuphila okuvula engxenyeni engezansi ebusweni lapho isikhumba nephimbo ongaphakeme, akwanele nje ukususa izigaxa Bichat, kubalulekile ukuchitha njengoba liposuction lwesilevu. Kodwa kungenzeka kusengaphambili ukubikezela umphumela ukusebenza, futhi kungakhathaliseki ukuthi ukususwa azilingani yalezi izigaxa? Ngokucophelela okukhulu, ungabona yi emva inqubo, uma esibukweni ukudweba izihlathi. Kahle susa ithonya ukucabangela wonke izici nezici isakhiwo ebusweni. Into eyisisekelo kunazo - kungcono ugobile ezahlukene emhlathini kwesokunxele nakwesokudla.
Yiziphi - izigaxa?
Yiziphi izigaxa Bichat, ukuthi ukutadisha ngokucophelela xaxa? Isici esivelele sesimiso yinhlama ukuthi Itholakala capsule, okuyinto eliyosenza. I capsule kuyadingeka, njengalokhu amahwahwa eziqukethwe capsule, eligeleza ngempela. Susa capsule ngokusebenzisa ukufinyelela iyatholakala ngaphakathi ngalo ingaphakathi ngomlomo. Ukusebenza ukuze asuse izigaxa Bichat kubhekwe kancane kuyashaqisa, futhi ngemva enifeza umuntu ngosuku olufanayo usungaya ekhaya.
Ngemva kwamasonto amabili, ukuphulukisa ephelele, ungabona nomthelela obonakalayo ekushintsheni ukubukeka. Imiphumela emihle azobonakala kunjalo, uma kungekhona ukususa izigaxa ngokuphelele, ngoba uma kungenjalo ubuso uyobheka hhayi kuphela sikhathele siyingcuba, kodwa futhi asebebadala. Lapho isuswe pad namanoni Bichat, iyiphi izimpawu ezingathandeki izibazi noma izibazi abasele. Ukusebenza wenziwa ngomlomo ingaphakathi ohlangothini engaphakathi izihlathi.
Uma ubheka endaweni kwamasonto ambalwa, lapho izigaxa Bichat zisusiwe ngaphambi nangemva izithombe, khona izobonwa kwenzeka ushintsho olukhulu. Ukuze afeze ukuhlinzwa okunjalo kufanele udluliselwe kuphela umkhuba professional ukuhlinzwa. A inzuzo enkulu ukusebenza eyenziwa esebenzisa laser. Okokuqala futhi okubaluleke - kungaphefumuli laser ngawo ukusebenza uqhutshwa, ephephile futhi ithembeke ngaphezu usebenzisa nommese.
Lapho usebenzisa i-laser, ngaphezu kukhona umphumela isinqandakuvunda, ngakho uthole ukutheleleka phakathi naleyo nqubo cishe kungenakwenzeka. Ngaphandle ukuthi zonke iziguli kalula ukubekezelela ukuphazamiseka kwe-laser, ba acishe musa ubuhlungu. Njengoba laser ukubeka esinembile, you phetho ubuso ziyalingana sibe nomthelela omkhulu yobuhle. Ngaphezu kwalokho, amanxeba ukuphulukisa ngokushesha ngemva kokuhlinzwa, azikho yezinkinga ezinzima. Worth kokubona umphumela ngemva izigaxa isuswe ka Bichat, izithombe ngaphambi nangemva kokuhlinzwa.
Feza operation evamile kungaba nge iyiphi indlela yokubulala izinzwa, kodwa ubhekwa best zendawo, ludlulele ngaphandle ubuhlungu futhi kuthatha ngaphansi amabili imizuzu isikhathi. Ngo operation imbobo encane senziwa, futhi akuphelanga isikhathi eside ngemva kokungenela isiguli eshiya emtholampilo bebodwa. Abaningi banesithakazelo, yini yokususa Bisha izigaxa intengo? Moscow has inqwaba kwemitholampilo, lapho imisebenzi enjalo kwenziwe, isilinganiso senani kuyinto ruble amabili nanhlanu kuya eziyizinkulungwane ezingamashumi ayisihlanu.
Kodwa ungakhohlwa ukuthi intengo ukuthengiselana okunjalo kungase kube ngaphezulu, esimweni ngasinye kubalulekile ukucabanga kokubili isimo sokucindezeleka, okuyinto izosuswa, futhi professional kakhulu. Naphezu kweqiniso lokuthi ukusebenza ulula, awudingi ukulisindisa. Ngokuyinhloko - konke liseduze kakhulu emsipheni nokushukuma udokotela ohlinzayo, kokuba nakho okuncane kungaba engaqondile kulimaze impumuzo. Futhi, kukhona ithuba, kanye ezandleni ongenalwazi, zibhekana ongalingani uthole njengoba amanoni izihlathi izosuswa Ukuboshelwa.
Kwabanye abantu, kukhona contraindications Ungasusi izigaxa Bichat. Kuyini futhi kungani abakwazi zisuswe? Akubalulekile afeze ukusebenza esifana intsha eneminyaka engaphansi kwengu-amabili nanhlanu. Ngaphambi kwalesi sikhathi uye ngokwemvelo kwehle fat umzimba, emva inqubo, umuntu Ungabheka mncane kakhulu futhi ukhathele. Phinda elahlekile amafutha umthamo kuyoba nzima kakhulu. Kukhona Izimo for namanye amaqembu iziguli.
Labo abantu abanale isisindo okweqile noma, Ngakolunye uhlangothi, awufiki isicelo imithetho, njengoba akudingekile ukuba bafeze lo msebenzi. Ngaphambi kokwenza operation esinjalo, kubalulekile ukuba kulesetayelekile ngokugcwele isisindo sakho. Kukhona futhi Izimo ukuhlinzwa okunjalo. Uma kukhona izifo ezithathelwanayo, abampofu igazi ekunqandeni noma zaba zimbi yizifo ezingamahlalakhona, kuba futhi akudingekile ukuya ukuhlinzwa.
Zikhona nanoma yiziphi izinkinga emva ukususwa Bisha izigaxa? Kakhulu akuvamile kuleli ngalo ingaphakathi ngomlomo, izihlathi, lapho ukusikeka enziwa, ukuvuvukala zingaqala. Lokhu kungenzeka uma ngephutha ukulimala mucosal kwezicubu emlonyeni - ekudleni okuqinile, ebusuku lokuphumula, noma lapho uhileleke kwezemidlalo umzimba. Futhi ucabange okuhlukile ukuvuvukala emzimbeni ngaphambi kokukhipha izigaxa.
Isikhathi nokuvuselelwa edingekayo izenzo ezifana ukuvakashelwa saziso kudokotela ngosuku olulandelayo ngemva kokuhlinzwa. Kufanele ukugqoka ngebhandeshi kokucindezelwa ku ezihlathini zakhe nokuvimbela edema. Idinga reception ezinsukwini ezimbili udokotela ebekiwe izidakamizwa, ezibandakanya no-antibiotic antiseptics uhlambulule ngokucophelela ngalo ingaphakathi ngomlomo. Uma yonke into yenziwe kahle, ngeke kube khona ukuphazamiseka ke izinsukwana sizokwazi ukubona umphumela walo msebenzi.
Ukuze wenze noma cha
Thola lapho ukwakha izigaxa Bichat, ukuthi iyini nendlela yokubhekana nazo, kufanele ucabangele isidingo ukuhlinzwa, futhi kuphela fully aware of isidingo ukususa buccal amafutha pad, walala phezu kwetafula yokusebenza, ngoba kokungenela kuhlinzwa kumele kube nengqondo. Kodwa ungakhohlwa ukuthi ubuhle kudinga ukuzidela. Ngokusho iziguli eziningi abakhetha le ndlela, hhayi kuphela baxoxelane izihlathi nokuwohloka futhi kuthuthukisa ukuma ebusweni, kodwa ngezicabha ngokuphelele.